musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Aaron Connolly Mwana WeChidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rokuti "The whizzkid". Yedu Aaron Connolly Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekumuka kwa Aaron Connolly. Image Credits: teregirafu, sununguka uye Twitter
Ehe, munhu wese anoziva iye aive iyeye anowedzera mudiki uyo akadzika Spurs pane yake yekutanga Premier League kutanga kwe2019 / 2020 mwaka. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Aaron Connolly's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, mazita ake akazara ndiAaron Anthony Connolly. Aaron Connolly akaberekwa pazuva re21st raJanuary 2000 kuna amai vake, Karen Connolly uye baba, Mike Connolly muOranmore, guta riri muRepublic of Ireland. Connolly aive mwana wekutanga kuberekwa kuvabereki vake vakanaka veIrish vanoratidzwa pazasi.
Sangana naAaron Connolly Vabereki Karen naMike. Image Chikwereti: sununguka
Aaron Connolly ane mhuri yake anobva kuOnanmore, guta riri muCalifornia Galway, kumadokero kweIreland. Nzvimbo yaakabva inowanzonzi seCtsika Mwoyo yeIreland, inzvimbo inozivikanwa nemararamiro ayo ane hupenyu uye mhemberero dzakawanda dzemitambo.
Maonero akanaka aOranmore muGalway County, kuIreland- uko Aaron Connolly akabva. Kiredhiti Irelandbeforeyoudie
Aaron Connolly haana kurerwa mumhuri yakapfuma yemhuri. Vabereki vake vakaita sevanhu vazhinji vaiita mabasa epakati eIrish asi vasina kumbonetsekana nemari yekuchengeta mhuri. Sekureva kwenhau dzemagariro, Aaron Connolly akakurira padivi pehama yake anonzi Ethan Connolly uyo akangofanana naye, akavawo munhabvu wenhabvu.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Vabereki vaAaron Connolly pakutanga vakada kuti mwanakomana wavo ave nyanzvi asina zano rekuti aizozvigadzika mumitambo. Kare ikako, Connolly aizoenda nezvehunyanzvi hwake kuedza kuBrancehill National School iri kumabvazuva kweGalway. Paaive kuchikoro, aive neziso rakatarisa pamunda wenhabvu padivi pechikoro chaaigara achitamba nhabvu mushure mekuitwa nemakirasi.
Aimbove mudzidzisi weBrierhill National chikoro anoenda nezita rekuti Conor Hogan anoyeuka mudiki Aaron Connolly semukomana mudiki aipfeka jerseys yebhora achibhururuka achitenderedza nzvimbo uye kurovera bhora renhabvu, zvisinei nemamiriro ekunze.
Aaron Connolly mazuva ekutanga neBrierhill National chikoro. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter
"Ini ndanga ndiri mudzidzisi wekutsiva ikoko kwemwedzi mitanhatu uye ini ndinorangarira vadzidzi vake vaive nevanhurume ve30 uye Aaron Connolly aive mumwe wevashoma vevadzidzi vaiita zvemitambo." Conor Hogan, Aaron aimbova mudzidzisi anoyeuka.
Saanomhanyisa wechidiki, Aaron Connolly akadzidza bhizinesi rake rebhizimusi seyakaoma, ichiderera pamberi. Pane imwe nguva, zvakaitika kune vabereki vake kuti pakanga pasina kumbove nekusahadzika kwakawanda kuti Aaron aive atungamira munzira kwayo. Pakupedzisira, kudada kwenhengo dzemhuri yake Aaron Connolly uye vadzidzisi vechikoro havana kuziva mabhairesi paakakokwa kuti aende kunoedzwa kuMervue United.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Mugore re2011, Aaron Connolly akaita danho kuenda kuGalway's repamusoro chikoro kirabhu Mervue United uko kwaakagamuchirwa mune yechikoro mushure mekupfuura miedzo yavo mune inoratidzika maruva. Vanzwisisa chishuvo chemukomana wavo wekutamba nhabvu yekurarama, vabereki vaCololly vakaita zvese zvavaigona kuti vatsigire zvido zvake.
Aaron Connolly Kuramba Kwekutanga Hupenyu. Chikwereti ku Twitter
Izvo hazvina kutora nguva kuti Aaron Connolly achinjike uye atange kuita mutsindo mune yechikoro uye akabata rukudzo rwake rwekutanga mutambo (ona pamusoro apa). Akasimudza matanho nekukurumidza uye akakokwa kutora chikamu mumakwikwi akati wandei emitambo.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Aaron Connolly yekutanga hombe mutambo wenhabvu wekubudirira akauya mune imwe shasha paakarova 18 nguva senge 15-gore. Kubudirira kwakaita whizkid kwakamuona achibatsira timu yake kuhwina mukombe wemuno zvaireva zvakanyanya kuvabereki vake.
Aaron Connolly Mugwagwa weFame Nhau. Kiredhiti sununguka
Kutenda kubudirira kwake, akazova mutambi akanakisa muparty yeCastlegar, Galway, Ireland. Izvi feat zvakamuwanirawo mukana wekusangana nevatambi vepamusoro muChirabhu nhabvu nhabvu pakati pavo yaive Brighton.
Mune gore 2016, Aaron Connolly akaita sarudzo kuenderera mberi nhabvu yake yekumakwikwi matanho nzira kunze kwenyika. Iyi yaive nguva yaakaita a fambisa kuyambuka Gungwa reIrish, uchijoinha Brighton & Hove Albion uyo akamukoka kuzotongwa mushure mekuona zvaakaita. Iye anoratidzira zvakakwana panguva yekuedzwa kwake uye kirabhu kuti imupe mbiri yemakore maviri. Gore iro 2016, iye zvakare akakokwa kuzomiririra Ireland yake U17 uye akatora chikamu muIrland School FA Cup iyo yaakakunda.
Aaron Connolly mushure mekukunda muIrish Schools FA Cup. Image Chikwereti TheArgus
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Aaron Connolly akakurira kubva pasimba pasimba kune ese makirabhu uye nyika nhabvu. Mu2017, akazova mushambadzi weinotungamira mukamuri inokodzera ye2017 UEFA European Under-17 Championship, akarova zvibodzwa zvinomwe mumatanho matanhatu.
Kuita uku kwakamuita kuti akurumidze kutsvaga-mushe muBlueon & Hove Albion pazasi-23 parutivi paakaita dhiri rake pazera regumi nemanomwe. Waizviziva here? Rutivi rwe Under-23 rwakabudirira kwaari sezvaaive anonzi mutambi wegore mune 2018 / 2019 Premier League's under-23 set-up, atora 11 nguva.
Aaron Connolly- Iyo Premier League2 2018-2019 Player yeiyo Mubairo Award. Chikwereti: Twitter
Kuhwina mubairo wakakura uyu kwakaita kuti maneja wechikwata chepamusoro, Graham Potter, afambise kudzoka kwake kuBrighton mushure mekukweretesa kwemari kubva kuLuton Town.
Aaron Connolly akatsungirira kukwikwidza kwemamiriro ekunze kusvika mukurumbira pane 5th zuva raGumiguru mumutambo wakanangana Tottenham kwaakarova zvibodzwa zvake zvekutanga zvePremier League, achirova kaviri mukukunda kwe3-0. Pazasi pane chidimbu chevhidhiyo chiitiko. Zvikwereti kuSpursTV.
Waizviziva here? Zvinangwa izvozvo zvakaita kuti Connolly the 100th weIrishman awane mubairo wePremier League uye wekutanga kuyaruka kuti akwanise vavariro yeBrighton pagungano rePremier League.
Aaron Connolly anopemberera chinangwa chake chakakurumbira chinopesana neSpurs. Chikwereti: Chakazvimirira
Pasina mubvunzo, mwana anoshamisa akaratidzira kune vateveri venhabvu kuti rwonzi rweIreland kugadzirwa mberi HAPANA KUSVIRA!. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Kuseri kwemurume wese akabudirira, pane mukadzi. Kune mutambi wenhabvu akaita saCololly, zvirokwazvo kune mbiri yakajeka WAG… ari kureva musikana wake akanaka anoenda zita raLucinda Strafford. Sezvinoratidzwa neye nhoroondo yake yemagariro enhau, vaviri vadiwa vakatanga kufambidzana naJanuary 2019.
Aaron Connolly akanaka Musikana- Lucinda Strafford. Chikwereti ku Instagram
Lucinda Strafford hapana mubvunzo kuti akanaka brunette uyo anomutsa kuvimba mune yega yega snap rake. Iye munhu asingazviratidze uye anoita chero chinhu kupfuura kupa manzwiro ekutsigira murume wake kunyange iwe zvinoreva kuisa hupenyu hwake pachezvake.
Aaron Connolly ane musikana anotsigira kwazvo. Chikwereti kuna IG
Imwe yemawani emuchato anofarira yezhizha ndiyo Spanish Tenerife chitsuwa uye mvura yeIbiza. Sezvinoonekwa pazasi, Lucinda anodanana zvikuru naAaron Connolly, uyo waanowanzomuti "muchinda wake".
Aaron Connolly anonakidzwa nechikepe anotasva nemusikana wake- Lucinda Strafford
Vese Aaron Connolly nemusikana wake Lucinda vangangova vari pakati pevakatangwa zvakanyanya veBrighton & Hove Albion Football Club. Idi rekuti vaviri vakadanana kwenguva pfupi zvino rinosiya pasina mubvunzo kuti muchato unogona kunge uri unotevera danho.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva Aaron Connolly Yemunhu Hupenyu chokwadi kure kumuona mukuita pane gomba zvaizobatsira iwe kuwana mufananidzo uzere iye.
Aaron Connolly Chako Hupenyu Hwechokwadi. Chikwereti: Twitter
Tichitarisa kubva pamufananidzo uri pamusoro, iwe uchaona Aaron Connolly munhu ane hupenyu uye ane hushamwari munhu anoda kugara achifara nezvaanazvo. Iye anozviona zviri nyore kuchinjira kune iro simba rakamupota uye anoshandisa pfungwa dzake pamukana wese.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Aaron Connolly anofara kuve akagadzira nzira yemhuri yake inoenda kurusununguko rwemari nekuda kwebhola. Kubva panguva yehudiki hwake, vabereki vake vakaita mutambo wenguva dzose wekutora mikana yese kumuona achitamba macheya ake ese.
Aaron Connolly nevabereki vake vanotsigira mushure mekukunda mukombe.
Vese Mike naKaren vakabata ndege yekutanga kuti vaone mukomana wake wekutanga Premier League kutanga uye yekutanga zvibodzwa zviviri. Sezvo Connolly akatora muchiitiko ichi, baba vake vanodada vaiziva kuti mwanakomana wavo akazadzisa zviroto zvake.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Kusvika pakuziva mararamiro aCololly nezve maitiro aanoshandisa mari yake zvaizokubatsira kuwana mufananidzo uri nani wake.
Kutanga kuenda, kusarudza pakati pekuita uye kufara pari zvino haisi sarudzo yakaoma kumwana weWhis. Kuita mari munhabvu inongova yakaipa yakaipa asi kuishandisa kumusikana wake Lucinda Strafford pavanoshanya mienzaniso yakanaka yekuenda; ( Jamaica, St Lucia, Mauritius, Ibiza, Antigua uye Las Vegas) zvinoratidzika kwaari, mararamiro akajairika.
Aaron Connolly Mararamiro. Chikwereti kuna IG
Mararamiro aAaron Connolly haana kusarudzika sezvo munhu angafungidzira mushure mekutarisa mufananidzo uri pamusoro. Zvinoratidzika kuti achiri nechikonzero chakasimba chekuchengeta mari yake muchiongororwa uye yakarongeka. Sezvo panguva yekunyora, hapana zviratidzo zveCololly showcasing flashy / exotic mota, dzimba, anodhura wristwatch nezvimwe.
Aaron Connolly Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Muenzaniso Wake Wokutevedzera: Sezvakangoita vazhinji veIreland nhabvu, Connolly anofambidzana neIrish ngano, Robbie Keane uyo waakafananidzwa naye. Akamutsiva nekutanga kuyaruka weIrish (kubvira Robbie Keane mu1999) kuwana brace muChirungu yepamusoro-ndege mutambo. Pazasi ndedzimwe dzeanogadzira-chinangwa mapundu ake maitiro ayo anofananidzwa neNhau yeRobbie Keane. Chikwereti kuVTSports
Akafunga kuti mukuru weIreland kushevedzera aive prank: Kwangosara vhiki imwe chete mushure mekupfimbana ne Spurs izvo zvakamuwanisa murume wekuratidzira, Aaron Connolly, Gare gare zuva iro rakagamuchira kudanwa kubva kumukuru mukuru weIreland Mick McCarthy kune nyika yavo inotevera Euro 2020 yekufanirwa kurwisa Georgia neSwitzerland. Akazviona kuti chaive prank mushure mekuudzwa nhau. Vamwe vese, sezvaakawona, yakava nhoroondo.
Aaron Connolly achitaurirana nemukuru weIreland Mick McCarthy kungoswera zuva mushure mekufona kuenda kuchikwata cheIreland. Kiredhiti kuna Sportsfile uye sununguka
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Aaron Connolly Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Irish Nhabvu Diary
Yakagadziridzwa zuva: Chivabvu 25, 2020